NY FANAHINTSIKA SY NY FANAHIN’ANDRIAMANITRA – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 mars 6, 2015 mars 6, 2015 Laisser un commentaire sur NY FANAHINTSIKA SY NY FANAHIN’ANDRIAMANITRA
« Ny Fanahy dia miara-milaza amin’ny fanahintsika fa zanak’
Andriamanitra isika. Ary raha zanaka, dia mpandova; eny sady mpandova an’Andriamanitra no mpiray lova amin’i Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manam-boninahitra aminy koa. » Romana 8:16-17
Raha araka izao tenin’Andriamanitra eto anatrehantsika eto izao, efa manana ny fanahintsika isika, nefa koa misy ny Fanahy dia ny Fanahy Masina izany. Ny fanahintsika dia manana safidy na hiombona amin’ny Fanahin’Andriamanitra na hiombona amin’ny fanahy ratsy. Fa raha nandray ny Fanahin’Andriamanitra isika dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra! Voalaza eto fa io Fanahy io no miombona amin’ny fanahintsika dia miara-milaza amin’ny fanahintsika hoe zanak’Andriamanitra isika. Raha ny marina izany, dia tsy miteny samy irery ny fanahintsika hoe zana’Andriamanitra isika fa mila miombona amin’ny Fanahin’Andriamanitra izy vao afaka miteny hoe zanak’Andriamanitra isika. Tsy teniteny foana eto ny hoe zanaka, fa misy tokoa ny fifandraisan’ny Ray sy izay zanany. Ny tena Zanany hatrany amboalohany moa dia i Jesosy Kristy, fa isika kosa dia zanaka natsangana. Ny Ray sy ny zanaka dia misy fifandraisana miavaka miohatra amin’ny Ray sy ny tsy zanany, koa na ny fiainana andavan’andro aza dia tsy maintsy hisy ny maha samy hafa azy. Misy ny fifankatiavana, ka na ny fitenenana, na ny fifampiresahana, na ny fifaneraserana dia ho hita ny maha mpianaka. Raha misy aza ny tsy mety na mampalahelo dia ho hita eo ny fifandraisam-pitiavana, ka na ny fananarana, na ny tsorakazo dia ho hita taratra ny fitiavana.
– Ny fanompoana dia ho tena samy hafa tokoa satria ho fanompoam-pitiavana izany ka maivana sy mahafinaritra, fa tsy fanompoana an-tery intsony.
MIARA-MILAZA: Ny Fanahy miara-milaza amin’ny fanahintsika hoe zanak’Andriamanitra isika! Tsy maintsy misy ny fifanatonana, izany hoe: misy ny fanetren-tena, na fietrena amin’ny andaniny sy ny ankilany. Ny Fanahy Masina moa dia efa fietrena ny hanekeny hiditra ao anatintsika, fa ny antsika kosa, moa ve hety hiara-hilaza, na hilaza aminy hoe miaraha amiko? Miaraha milaza amiko? Ny olana mantsy dia misy ny fanahy ratsy izay tsy hanaiky mihitsy ny hiray amin’ny Fanahin’Andriamanitra! Koa anjaran’ny fanahintsika ny misafidy ny fanahy iarahana milaza, na zanak’Andriamanitra ianao na zanaky ny devoly. Anjaranao ny misafidy. Sady mpandova an’Andriamanitra no mpiray lova amin’i Kristy. Amin’ny maha zanaka, dia rariny raha ho mpandova ny zanak’Andriamanitra. Omen’Andriamanitra anjara ny zanak’Andriamanitra. Ny lova lehibe indrindra moa dia ny fiainana mandrakizay. Misy dikany lehibe ny hoe: mpiara-mandova amin’i Kristy! Ny lovan’i Kristy dia tsy ho ratsy mihintsy. Voalaza eto fa mila miaritra isika fa misy ny fahavalo amin’izany! Koa mahereza indrindra isika ao amin’ny Tompo!
Publié parfilazantsaramada mars 6, 2015 mars 6, 2015 Publié dansUncategorized